Kuwedzera kweVR Tide Mukutsikisa uye Kushambadzira | Martech Zone
Kubva kutanga kwekushambadzira kwemazuva ano, mhando dzakanzwisisa kuti kuumba kubatana nevashandisi vekupedzisira ndiko musimboti wezvekubudirira kushambadzira zano - kugadzira chimwe chinhu chinomutsa manzwiro kana chinopa chiitiko kazhinji chine mukurumbira usingagumi.
Nevashambadziri vachiwedzera kutendeukira kudhijitari uye nhare mbozha, kugona kubatana nevashandisi vekupedzisira nenzira yekunyudza kwakaderera. Zvisinei, chivimbiso chechokwadi chaicho (VR) sechiitiko chekunyudza chiri pamucheto wekubuda kwevaparidzi, vashambadziri nevashambadzi. Muchokwadi, vamwe vevatambi vakakurisa munzvimbo yemidhiya vari kudhizaina muiyi tekinoroji vatengi vazhinji vasati vatombove neyadzo VR headset. Kunyange ruzhinji rwevanhu veAmerica vasati vagamuchira pfungwa yekutsvaga nyika dzepasirese, vezvenhau vari kutarisisa nguva nekuedza kwemaitiro ekuisa VR muhurongwa hwavo hweramangwana rekuburitsa - uye zvine hungwaru kuti vatengesi vaite zvakafanana.
Sei? Sevashambadziri venhau nevashambadziri vanotsvaga nzira inotevera yekupinda pamberi pevatengi vavo nekubatana navo padanho rakadzika, ndeipi nzvimbo iri nani yekusangana nekuraira kutarisisa kwavo kupfuura mukati mepuratifomu yakazara-inonyudza inowanikwa kubva chero kupi? Chokwadi chaicho ndiyo mhinduro.
Kubva pazviitiko zvemitambo kusvika kumagazini zvemukati, VR tech yakagadzirira kuchinja zvakanyanya nzira iyo vatengi vanoona midhiya, uye heino chikonzero nei vaparidzi nevashambadziri vari kusvetukira mubhodhi pamberi pekutorwa kwevanhu vazhinji:
Nhau nzvimbo dzakadai se Associated Press uye The New York Times vari kugadzira zvirimo zveVR zvakasungirirwa kune zvinomanikidza, zvinofungwa mupfungwa. Iyo lenzi yeicho chaicho inounza vatengi padyo neanoshungurudza moyo-kana anodziya-moyo chiito, ichipa ruzivo rwevezvenhau runotenderera pane cinematographic.
Vashambadziri vebrand vanogona kuongorora maitiro ekuva chikamu chenyaya idzi, sevatsigiri kana sezvikamu zvinonyudza zveiyo nyaya yacho pachayo. Nhau dzepamoyo ndidzo dzinotyaira chepamusoro chevatariri kuita, kuraira masocial media share, traffic uye commentary inotora hutachiona uye inoita kuti vanhu vadzokerezve zvimwe.
Kuenderera Mberi Dhijitari
ne 84 muzana yevakuru veAmerica kushandisa Internet uye 68 muzana vane yavo smartphone, zvemukati zvemadhijitari zviri kudyiwa pamwero unotyisa. Vatengi vanoda mukana wekuwana zvemadhijitari uye vaparidzi vanofanirwa kuzadzisa zvinodiwa nevatengi zvekugutsikana nekukurumidza. Sezvo vanhu vazhinji vachitarisira zvemadhijitari pazvigunwe zvavo, vachatarisawo zvinotevera… inova iyo VR inotamba.
VR inotora zvemadhijitari padanho rinotevera uye ichatanga kugamuchirwa ne zvizvarwa zvemadhijitari uyo akakurira ne smartphone tekinoroji uye zvemagariro midhiya. Kuburikidza neVR, vatengi ava vanogona kuona zvemukati mune wekutanga-munhu, vachiva chikamu chezviito uye - mune dzimwe nguva - vanobatanidzwa mune "sarudza yako wega adventure" mhando yemamiriro ezvinhu.
Fungidzira kana iwe uchigona "kufamba" kupinda munyaya uye kusarudza kuburikidza nemaonero aani uye nekona ipi yaunoona zvirimo? VR inoita izvi zvive zvechokwadi uye nhepfenyuro vanonyanya kufarira chikamu ichi cheVR, vachitsvaga maitiro ekuchishandisa kumabhizimusi emabhiriyoni emadhora emitambo.
Mutambi wenhabvu anonzi anonyanyisa nechikonzero - ivo vakavimbika, vanoshingairira vateereri vanogara vachipinda kuti vaone zvikwata zvavanofarira paTV nepamhepo. Ko kana vateveri ava vaigona kusangana nemutambo iwoyo musango, vachizvitarisa kuburikidza nemeso eiyo quarterback pavanokanganisa, uye kubva kuzvigaro pamakumi mashanu yeyadhi mutsara kana uchidzivirira? Kupayona tekinoroji yeVR inobvumira mafeni kuti vaone mitambo munzira dzisingakwanise neterevhizheni yechinyakare.
Panzvimbo pekuona mutambo kana chimwe chiitiko chekutepfenyura kubva kumakona mashoma akafanotemerwa, VR inovhura mukana wekuti vataridzi vagadzirise zvirimo - uye zvakafanana zvinoitirwa vashambadziri. Zviitiko zveBrand zvinogona kuiswa mukati meVR yepasirese, zvichipa vateereri sarudzo mune zvavanoda kuona kubva kune vanoshambadzira. Nyota? Mutengesi mumasitendi anouya nepakati, achipa chairo chinwiwa uye achigadzira maratidziro echiratidzo.
VR inotamba mune chinodikanwa chese chaicho-nguva uye inonyudza zvemukati - zvinhu zviviri zvakagamuchirwa nema digital digiti sevamiriri venhau nhasi. Rarama, zviitiko-chimwe-zvidimbu zviri kupa nzira kumatatu-epamhepo, yekutanga-munhu zviitiko uye VR iri kutungamira iyo kuchaja. Vaparidzi veSavvy nevashambadziri vanogona kusvetukira mungarava kuti vafambe nemhepo inokwira yeVR, kana kumhanyisa njodzi yekunyura pasi pegungwa risingaperi rezvinhu zvakajairika zvemadhijitari.
Zeiss VR Imwe Uyezve ye iPhone 6 Series Zeiss VR Imwe Uyezve ye iPhone 7 Series
Kuzivisa: Hatina kubhadharirwa chinyorwa, asi tiri kugovera edu Amazon Affiliate ma link ku Zeiss 'kuhwina mubairo weVR headset.
Tags: digital zvemukatizvizvarwa zvemadhijitarikunyudza zvemukatiiPhone 6iPhone 7kutsikisaStorytellingrakapotsa chokwadichaiyo chaiyo headsetvrvr headsetvr imwevr imwe headsetzeisszeiss vr imwe kuwedzera